Xeebta Es Trenc ee Mallorca | Wararka Safarka
Xeebta Es Trenc ee Mallorca
Mariela Carril | | Espana, Xeebaha
Waxaa hubaal ah in sannadka soo socda uu noqon doono sannad caadi ah oo aan awoodno inaan ku raaxaysanno fasaxyada xagaaga in ka badan. Markaa waan awoodnaa u safraan Majorca kuna naso xeebaheeda, qorraxda xagaaga hoostiisa.
Qulqulka Mallorca waa weyn yahay, xeebaheeda sidoo kale, waxaa jira hawlo ballaaran oo kala duwan, waxaa jira Sierra de Tramontana oo qurux badan, godad, dhismayaal taariikhi ah iyo waxyaabo kaloo badan. Laakiin haddii ay jirto xeeb sacabka qaadata, waa tii Xeebta Es Trenc.
2 Xeebta Es Trenc
Mallorca waa mid ka mid ah Balearic Islands laga soo bilaabo Badda Mediterranean -ka iyo caasimaddiisu waa magaalada Palma de Mallorca. Waa jasiirad weyn, 3640 kiiloomitir oo laba jibbaaran, waxayna leedahay ku dhawaad ​​859 kun oo qof.
Jasiiradda waxaa lagu gartaa Kala duwanaanta buurta Tramontana, oo waqooyi -galbeed ka samaysata qarar aad u qurux badan, oo ka dhex dillaaca godad qarsoon, iyo Sierra ee Levante oo dhererkoodu aad u suubban yahay. Wax badan baa jira godad leh harooyin dhulka hoostiisa ah, doox dhexe oo barwaaqo ah iyo bayd qurux badan oo ah halka ay caasimaddu ku nasato.
Cimilada jasiiraddu waa mid aad u badan Mediterranean -ka oo xilliga jiilaalka baraf xoogaa ka da'a buuraha dhaadheer, laakiin uma badna inay hoos u dhigi doonto sidaa darteed jiilaalka, guud ahaan, waa khafiif.
Maalinba maalin dhaqaaluhu wuxuu ku salaysan yahay dalxiiska iyo dhismaha Taasina waa sababta masiibada oo socotay muddo hal sano iyo bar ah ay aad ugu dhufatay.
Xeebta Es Trenc
Es mid ka mid ah kuwa ugu caansan uguna caansan Mallorca. Waxay leedahay ciid wanaagsan iyo biyo cad oo dhalaalaya laakiin waxay bixisaa waxqabadyo madadaalo oo yar. Xeebtaan wuxuu ka bilaabmaa Ses Covetes, xeeb aad u qurux badan oo leh biyo hufan iyo ciid cad, xasilloon, oo u dhexaysa sa Ràpita iyo Trenc, magaaleynta isla magaca.
Ses Covetes sidoo kale waa meel caan ah oo caan ah, oo leh 250 mitir oo xeeb ah, oo leh laba aag, mid ciid ah iyo dhagaxa kale, oo la yiraahdo Freu. Kadib, ka dib Ses Covetes, the Xeebta Es Trenc, oo ah dhul bacaad ah oo dhererkiisu dhan yahay 3 oo mitir oo u qaybsan saddex aag.
Waxaa jira Arenal den tem, Arenal den Tenc iyo Es Trenc Beach oo ah qaybta ugu dhow Colonia de Sant Jordi. Qayb kasta lama xadayn oo dhammaantood waxay ku fidsan yihiin hab bikro ah, oo ay ku jiraan godadkooda.
Sida xeeb kasta oo halkan ku taal, waxay ku saabsan tahay qorrax -u -dhaca, wax yar maydho iyo wax kale oo aan samaynayn, maxaa yeelay xeebtu wax yar bay ku siinaysaa haddii aad firfircoonaato. Qorraxdu halkan way xoog badan tahay oo ma laha hooska dabiiciga ah markaa ama dalladaad keento ama waa inaad kiraysataa.
Ku -qaadashada saacadaha qorraxda kulul hoosteeda ma aha wax lagu farxo. Ma jiraan qolal beddela ama qubeys, kaliya musqulaha aasaasiga ah. Waxaa jira dhowr baararka xeebta Waxay iibiyaan cuntada oo muusikada xoogaa ayay marmar mariyaan, laakiin had iyo jeer ma aha. Waxa ugu fiican ayaa ah inaad timaadid adigoo si fiican u qalabaysan: dallad, kursi fadhiga, cunto iyo cabitaan.
Waxaa jira hal makhaayad Sababtaas awgeed, haddii aadan meel dhigin way adag tahay inaad hesho meel bannaan. Cuntadu waa wanaagsan tahay, paellas, cuntada badda, kalluunka, sidoo kale waxaa jira Maqaaxi Si loo qanciyo gaajada macmacaanka, Flor de Sal waa Trenc. Ikhtiyaarro dheeri ah, waa inaad ka tagtaa xeebta oo aad u aaddaa dhanka Colonia San Jordi, tusaale ahaan.
Maskaxda ku hay in aysan jirin hoteello ama dhismayaal kale halkan, dabeecad saafi ah, bad dhinac ah, dunes dhinaca kale iyo dadka u dhexeeya. Baddu waa mid cajiib ah, deggan oo buluug buluug buluug ah, gacmeed, hirar yar, ku dhawaad ​​Kariibiyaanka. Dhinaca kale, godadka, dhagaxa, geedaha geed iyo duurka oo gaadha Salobral de Campos, oo ah 1500 hektar dhul qoyan oo dabiici ah oo leh haro, guryo milix iyo shimbiro.
Maxaan samayn karnaa marka laga reebo qorraxda iyo qorraxda? Socodku waa ikhtiyaarWaxay u dhowdahay saddex kiilomitir waana jimicsi wanaagsan, gaar ahaan subaxdii ama galabtii dambe. Socodkaas waxaad ku arki doontaa qaar ka mid ah gabbaadyo qori mishiino ah shukaansiga laga soo bilaabo Dagaalkii Labaad ee Adduunka waxayna qayb ka ahaayeen nidaamka difaaca xeebaha. Jeexay, laga tagay, qaawanaa oo gaboobay, 2014 waxay ahaayeen shay ficil farshaxan ah oo ay sameeyeen kooxda Boa Mistura oo ka socota Madrid, kaasoo ku rinjiyeeyay caddaan oo qoray qaar ka mid ah gabayga "Cala Gentil", ee Miquel Costa i Llobera.
Haddii aad jeceshahay dhaqdhaqaaqyada biyaha, runtu waxay tahay inaysan badnayn, snorkel kaliya. Xeebaha kale waxaa jira dalab dheeraad ah, waxaad raaci kartaa doon moos ah, samada diyaaradda ama parasail laakiin halkan ma joogo. Halkan, oo keliya qiiq -qiiq iyo aad uga sii fiican haddii dabayshu aysan ka kicin xagga koonfureed maxaa yeelay waxay ka qaaddaa biyaha waxayna ka dhigtaa daruur. Waxaa jira a kor u kaca haddii ay dhacdo in qof isticmaalo kursiga curyaanka, iyo qaar qoraallada badbaadinta meelaha ugu mashquulka badan xeebta.
Qorraxda qoyso, biyo ku dhex qoy, soco, waxoogaa cilmi baaris ah ku samee goobooyinkii hore, dabaylaha iyo wax kale oo badan. Naso, wax akhri, wax dheh, hadal ... Taasi waa waxa xeebta Mallorca ay bixiso. Iyo dhammaadka maalinta, haddii aad joogto eeg qorrax -dhaca Hagaag, waxaad yeelan doontaa hadiyadda ugu wanaagsan dhammaantood: cirka midabka leh, milicsiga qorraxda ee ku dhinta biyaha, dhammaan oranji, dahab iyo cawl madow ...
Astaamahan, Dad noocee ah ayay soo jiidataa? Dhalinyarada, inta u dhaxaysa 20 ilaa 30 sano Aqlabiyaddiisa ugu weyn. Haddii aad xoogaa ka fogaato waxaa laga yaabaa inaad sameyso qaawan. Laakiin sidee ku timaadaa halkan? Waa hagaag laga bilaabo Ses Covetes, haddii aad ka timaaddo woqooyi, iyo waddo dhex marta Salobrar de Campos, macdanta milixda iyo dhulka qoyan, haddii aad ka timaaddo koonfurta. Run ahaantii wadadani waa mid aad u qurux badan maxaa yeelay waxaad aragtaa muuqaalkaan.
Dadka jecel shimbiraha ayaa ku jiri doona daaweyn. Dhab ahaantii, waxaa mudan in la xusuusto taas Mallorca waa meel aad u fiican oo lagu daawado shimbiraha iyo in halkan uu yahay guriga kaliya ee adduunka gorgor madow. Gorgorradu waxay ku jiraan buuraha, laakiin noocyada kale ee shimbiraha ayaa ku wareegsan halkan, jidka Playa es Trenc.
Markaa haddii aad gaadhi ku timaaddo waxaa jira meelo badan oo baabuurta la dhigto laakiin dhammaantood waa lacag, labada dhinac ee koonfurta iyo waqooyiga. Haddii aad ku timaaddo gaadiidka dadweynaha waad ku soo geli doontaa baska iyo dhinaca Ses Covetes. Ma xareyn kartaa? Maya, waa xaaraan. Sidoo kale ma jiraan wax hoy ah oo lagu hoydo sidaa darteed, mar kale, haddii fikraddaadu tahay inaad ku sugnaato aagga waa inaad aaddaa Colonia de San Jordi halkaas oo ay ku yaalliin hudheelo iyo hudheelo yaryar iyo filooyin guryo kiro dalxiis ah.
Dhawr jeer baan magacawnay Colonia Sant Jordi waana in marka laga hadlayo kaabayaasha dalxiiska ay aad u dhameystiran tahay. Halkaan waxaa ku yaal dalabyo isboorti oo biyo ah, loox alwaax ah oo lagu dhex socdo dukaamo iyo maqaayado, xafiis dalxiis, dalxiisyo iyo waxyaabo kaloo badan.
Wax yar ayaa ka sii dheer Ses salines, magaalo raaxo leh oo leh baarkinkeeda dabiiciga ah, oo ku habboon in lagu socdo baabuur ama baaskiil. Ugu dambayntiina, Sa Rappita, magaalo u dhow Es Trenc, oo aad joogi karto, ka kiraysan karto dalxiisyo badda agteeda ah ama aad cunto u aadi karto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Getaways Yurub » Espana » Xeebta Es Trenc ee Mallorca
Juan Snow dijo
Es trenc xagaaga waa cadaab. Waxaa ka buuxa dalxiisayaal, xitaa ma haysatid meel aad ku riddo shukumaan. Waynaadeen waa in la yidhaahdo ugu yaraan. Xagaaga ha tegin.
Ka jawaab JuanSnow
Lixda magaalo ee ugu nabdoon adduunka